आहा ! मनमोहक तिलिचो कसरी पुग्ने ? (फोटो कथा) - Naya Pusta
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७५ मंसिर २३, आईतवार १३:५८
मनाङ । विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको तिलिचो ताल नेपालको मनाङ जिल्लामा पर्दछ । हिमालय पर्वत श्रृखला अन्र्तगत अन्नपुर्ण क्षेत्रभित्र पर्ने यो ताल समुन्द्री सतहदेखी ४९१९ मिटरको उचाईमा रहेको छ ।
यसको लम्बाई ४ किलोमिटर र चौडाई १.२ किलोमिर र गहिराई सरदर २०० मिटर रहेको छ । ताल वरिपरि मुक्तिनाथ, तिलिचो, खाग्सार हिमालहरुले पर्यटकको लागि झन आकर्षित गर्दछ ।
आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आर्कषक गन्तव्यको रुपमा तिलिचो ताल बन्दै गएको छ । बिगत केहि बर्षदेखि बाह्य भन्दा आन्तरिक पर्यटकको संख्या बृद्धि भएको स्थानिय बताउँछन् । विशेष गरी असोज र कार्तिक महिनामा तिलिचोमा आन्तरिक पर्यटकको घुँइचो लाग्दछ ।
तिलिचो ताल काठमाण्डौबाट तनहुँको डुम्म्रे, लमजुङको बेँसीशहर हुँदै मनाङको खाङसार सम्म गाडीमा जान सकिन्छ । अफ रोड भएपनि एक, दुई ठाउँ बाहेक बाटो राम्रो रहेको छ । बेँसीशहरबाट कच्ची रोड भएकोले करिब ८/९ घण्टामा मोटरसाईकलमा पुग्न सकिन्छ ।
मोटरसाइकल नहुनेका लागि बेशिशहरको मनाङे चौताराबाट बोलेरो जीपहरु रिर्जभ वा भाडामा पाइन्छ । त्यँहाको प्रशासनले तोकेको भाडा बेशीशहरबाट खाङसारसम्म २००० रहेको छ ।
दशैँ र तिहारको आसपासमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्ने कारण खाङसारमै होटलहरु प्रसस्त नभएकोले, खाङसारभन्दा तल मनाङ् वा पिसाङमा बास बस्दा राम्रो हुन्छ । खाङसारबाट झण्डै ५ देखी ८ घण्टाको पैदनल यात्रामा तिलिचो बेशक्याम्प पुग्न सकिन्छ ।
वेशक्याप्मा मात्र ३ वटा होटल रहेको छ । सिजनको समयमा टेन्टको व्यवस्था गरिहएको हुन्छ । एक रात वेशक्याम्प बसेर अर्को दिन तिलिचोको यात्रा गर्न सहज हुन्छ । वेशक्याम्पमा एक छाक खानाको ६५० रुपैयाँ पर्दछ ।
बेशक्याम्पबाट उकालो बाटो झण्डै ४ देखि ८ घण्टामा तिलिचो तालमा पुग्न सकिन्छ । विशेष गरी बेशक्याम्प भन्दा माथि लेक लाग्ने समस्या पनि पर्न सक्छ । यदि आफुलाई अप्ठ्यारो भएमा जति सक्दो तल झर्नुपर्ने हुन्छ । लेक लाग्नबाट बचाउन तथा स्वासप्रश्वास प्रक्रियालाई सहज बनाउन लसुन, अदुवाको सेवन गर्न स्थानियहरु सुझाउछन् ।
तालसम्म पुग्ने बाटो उकालो र कठिन भए पनि तालमा पुगिसकेपछि सम्पूर्ण पीडाहरु त्यहाँको मनोरम दृश्यले भुलाउँछ । चारैतिर हिमाल वीचमा सफा कञ्चन नीलो तालको मनमोहक दृश्यले सम्पूर्ण थकान बिर्साउँछ । तिलिचो तालको छेउमा चिया पसल छ । तातो पानिको १ सय रुपैयाँ र कालो चियाको २ सय रुपैयाँ पर्दछ ।
बाटोमा खान, बस्न जगत, धारापनी, दानाक्यू, चामे, पिसाङ्, मनाङ, खाङ्सार, बेहक्याम्पमा लज तथा चिया पसलहरु रहेका छन् ।
त्यस्तै च्याम्चे, धारापनी र चामेमा मोटरसाइकल वर्कसप पनि रहेको छ । खुदी, धारापनानी र चामेमा प्रहरी कार्यालय रहेको छ । चामेमा नेपाली सेना र शसस्त्र प्रहरीको क्पाम्प पनि रहेको छ ।
तस्बिरहरुः लोकराज भण्डारी
प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकता गुमाएः कांग्रेस नेता
नेपाल महिला संघले माग्यो गृहमन्त्री थापाको राजिनामा